Mpempe akwụkwọ ụbọchị na abalị, ụbọchị China na abalị ndị na-emepụta ihe, ndị na-eweta ngwaahịa, ụlọ ọrụ - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
Clear acryli mpempe akwụkwọ
Agba Acylic Sheet
Day & Night Acryli Mpempe akwụkwọ
Frosted / Matte Acryli mpempe akwụkwọ
Sanitary (Bathtub) Acryli Mpempe akwụkwọ
Mirror Acryli mpempe akwụkwọ
Fabric, Ewute acryli mpempe akwụkwọ
Mpempe Akwụkwọ Pụrụ Iche
Bụrụ onye nkesa anyị
Nweta nnwere onwe n'efu
>lọ>Product>Day & Night Acryli Mpempe akwụkwọ
Opal & ọcha agba acryli mpempe akwụkwọ
Uzo na agba Acryli Sheet
Translucent & Opaque agba Acryli Sheet
Fluorescent agba acryli mpempe akwụkwọ
Agba agba acryli mpempe akwụkwọ
Agba Chain Acryli mpempe akwụkwọ
ehihie na abalị mpempe akwụkwọ
Anyị nwere mpempe akwụkwọ ụbọchị / abalị dị na ahịrị ngwaahịa nkedo anyị. Nke a na-enye mpempe akwụkwọ ahụ ọdịdị nke mpempe akwụkwọ ojii n'oge ehihie (mgbe ọ bụghị azụ azụ) na ọdịdị nke mpempe akwụkwọ ọcha n'abalị mgbe azụ na-acha ọcha. Day na abalị mpempe akwụkwọ na-abịa n'otu akụkụ frosted, size dị na 1220x2440mm na 2050x3050mm.
ase Ntụle ngosi
ihe onwunwe 100% Ihe Mitsubishi ọhụrụ na -amaghị nwoke
ọkpụrụkpụ 1.8, 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60mm (1.8-60mm)
Agba uzo (doro anya), ọcha, opal, nwa, ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, odo, wdg OEM agba OK
Ọkwa ọkọlọtọ 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550,
Akwụkwọ OA, SGS, DE, na ISO 9001
Ụdị iko dị mbubata (nke sitere na Pilkington Glass na UK)
MOQ Iberibe 30, nwere ike gwakọta ya na agba/nha/ọkpụrụkpụ
nnyefe 10-25 ụbọchị
Ihe odide General Cast Acrylic Sheet:
Transmit Mgbasa ozi dị elu ruo 92%;
Weight Ịdị arọ: ihe na -erughị ọkara ka iko;
◇ Ọmarịcha ihu igwe na -eguzogide megide agba agba na nkwarụ;
Resistance Nguzogide mmetụta pụrụ iche: ugboro 7-16 karịa mmetụta mmetụta karịa iko;
Ezigbo kemịkal na nguzogide igwe: iguzogide acid na alkali;
◇ Ịdị mfe nrụpụta: Enwere ike ịchacha mpempe akwụkwọ acrylic, kpuchie ya na silk, kpuchie ihe mkpuchi, ma nwee ike ịcha ya, gwuo ya, ma rụọ ya ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla mgbe ewe iwe dị ọkụ.
◇ Mpekere acrylic nke nwere ọkwa dị elu nke emere naanị 100% akụrụngwa na-amaghị nwoke.
◇ Mpempe akwụkwọ acrylic niile bụ mkpuchi UV, mpempe akwụkwọ nkwa abụghị mgbanwe mgbe ị na-eji n'èzí, nwere ike iji n'èzí maka afọ 8-10.
◇ Enweghị isi mgbe ị na -egbutu ha site na laser ma ọ bụ igwe CNC, na -adị mfe ma na -akpụ akpụ.
◇ A na -ebubata ihe nkiri na -echebe, buru ibu ma dị mfe iwepu, enweghị gluu fọdụrụ.
◇ Ndabere kacha mma na oke zuru oke
UMUAKA UNIT URU Ọ BAARA
ECHICHE Nnukwu njupụta - 1.19-1.2
Ike Roswell n'arọ/cm 2 M-100
Ike shiee n'arọ/cm 2 630
Ike ike n'arọ/cm 2 1050
Ike ọdụdọ n'arọ/cm 2 760
Ike mkpakọ n'arọ/cm 2 1260
EGO Ike Didlectic Kv / mm 20
Eguzogide elu Ohm > 10 16
OPTICAL Nnyefe Ìhè % 92
Ndepụta Refractive -
ERB .R. Okpomkwem
Ọnụego nke Thermal Cortductivily Cal/xee/cm///cm
Temp Na -ekpo ọkụ ℃ 140-180
Mmebi ọkụ na -ekpo ọkụ ℃ 100
Kwes Mgbasawanye ọnụọgụ Cmfcm/V 6 × 10-5
ANYANWU Mmiri ịmịkọrọ mmiri (24Hrs) % 0.3
Isi % Ọ dịghị onye
Mgbasawanye na nkwekọrịta
Iwere mpempe akwụkwọ acrylic 1000mm n'ogologo dịka ọmụmaatụ.
N'oge ọkọchị (40 ℃), Ọ ga-agbatị ruo 1002 N'oge oyi (-30 ℃), Ọ ga-agbada ruo 997mm.
Mpempe akwụkwọ acrylic anyị kachasị mma nwere idoanya dị mma, ihu igwe na ike dị elu. Enwere ike itinye ha ọkụ, belata, gbue, gbue, rụpụta, kanye, mee ka ọ dị mma na glued.Ha nwere ike tinye aka na ntinye aka na mgbasa ozi/ọgwụ/mgbochi/acrylic mgbochi/akụrụngwa/sanitaryware/ụkpụrụ ụlọ/ime ụlọ na arịa ụlọ /ọla acrylic na ihe ndị ọzọ.
◇ Asambodo nke mpempe akwụkwọ acrylic anyị nwetara: ISO 9001, CE, SGS DE, akwụkwọ CNAS.
Ajụjụ: you bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara nwere ahụmịhe afọ 15 na ngalaba a.
Ajụjụ: Kedu ka m ga -esi nweta sample?
A: Obere nlele dị bụ n'efu, naanị ịnakọta ibu.
Q: Ogologo oge ole ka m ga-atụ anya inweta ihe nlele ahụ?
A: Anyị nwere ike ịkwadebe nlele n'ime ụbọchị 3. Ọ na-ewekarị ihe dị ka ụbọchị 5-7 maka nnyefe.
Ajụjụ: Gini bụ MOQ gị?
A: MOQ bụ 30pieces/ịtụ. Ogo ọ bụla, ọkpụrụkpụ.
Ajụjụ: Kedu ụdị agba ị nwere ike ime?
A: Anyị nwere agba 60 oge niile, anyị nwere ike hazie agba pụrụ iche dịka ihe ị chọrọ si dị.
Ajụjụ: Anyị enwere ike ị nweta akara ngosi ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ na ngwugwu gị?
A: N'ezie. Enwere ike itinye akara gị na ngwugwu site na ibipụta ma ọ bụ akwụkwọ mmado.
Ajụjụ: Gịnị bụ oge ndu gị maka imepụta oke?
A: Dị ka ọ na-adịkarị, ụbọchị 10-30, dabere na nha, ọnụọgụ na oge.
Ajụjụ: Gịnị bụ oge ịkwụ ụgwọ gị?
Q: Kedu ka esi etinye ya?
A: Mpempe akwụkwọ ọ bụla nke ihe nkiri PE kpuchie ma ọ bụ akwụkwọ nka, ihe dị ka tọn 1.5 juru n'ọnụ na pallet osisi.
Jumei bụ ụwa-klas nkedo acrylic Ibé akwụkwọ emeputa & Mmepụta, anyị factory emi odude ke Yushan Industrial Mpaghara Shangrao City, Jiangxi n'ógbè. The factory-ekpuchi ebe ndị 50000 square mita, afọ na arụpụtaghị esịmde 20000 tọn.
Jumei na-ewebata ọkwa ndu ụwa nke na -emepụta ahịhịa na -emepụta akpaaka, wee jiri 100% akụrụngwa akụrụngwa dị ọcha iji hụ ogo kacha mma. Anyị nwere ọtụtụ iri afọ 'akụkọ ihe mere eme na-ekere òkè na acrylic ụlọ ọrụ, na nwere a ọkachamara R & D otu, anyị factory na anyị nwetara niile kwekọrọ na mba ọkọlọtọ ISO 9001, OA na SGS.
20 afọ igba acrylic emeputa
12 afọ mbupụ ahụmahụ
Advanced ọhụrụ factory, ọkachamara engineer otu si Taiwan ， anyị exported karịa mba 120.
N'ụzọ zuru ezu-akpaka mmepụta edoghi
Advancedlọ ọrụ anyị dị elu nwere akara mmepụta isii zuru ezu, nke na-enwe ike ịkwado arụmọrụ kachasị elu, ntụkwasị obi na nchekwa. Anyị nwere ike iru ọkwa 20K ugbu a dị ka mmepụta kachasị kwa afọ, na n'ọdịnihu na-abịanụ, anyị ga-emeziwanye ikike anyị mgbe niile iji gboo mkpa ndị ahịa anyị na-eto eto.
Iji na-eje ozi ihe mgbaru ọsọ nke na-enye n'elu-edu acrylic mpempe akwụkwọ ngwaahịa, anyị na-e upgrading anyị omumuihe: ndị dustproof omumuihe nwere ike ekwe nkwa n'elu-larịị àgwà nke anyị ngwaahịa site dum n'ichepụta Filiks.
Mbubata & Mbupu
Enweghị mmachi, yana ọnụ ọnụ PVC
Nha na -enweghị atụ dịka 1250*1850mm, 1050*2050mm, 1250*2450mm, 1850*2450mm, 2090*3090mm
◇ A na -emegharị ya, na -enweghị akụkụ PVC
Trimmed nha dị ka
◇ Ekpuchi site na akwụkwọ nka nka
Akara nwere ike ịbụ akara anyị Jumei Logo dịkwa mma ịme akara ngosi OEM
◇ Ejiri akwụkwọ ọrụ aka nkịtị kpuchie ya
Akwụkwọ dị mfe iwepụ, ebubata na Malaysia, ma akwụkwọ nkịtị na akwụkwọ akara JM
◇ Ekpuchila ihe nkiri PE
Typesdị ihe nkiri PE abụọ Ihe nkiri PE na -acha ọcha, nwere ike mee akara ngosi OEM
Factory: Yushan Industrial Mpaghara, Jiangxi China
Hailọ ọrụ Shanghai: 1309lọ 360, Mba XNUMX, Changshou Road, Shanghai, China
Faksị: + 86-21-6070 9725
Copyright © Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. Ikike niile echekwabara. blog